U-ASHLEY HEBERT UNOMBULELO KU-JP ROSENBAUM PHAKATHI KOQHAWULO MTSHATO 'OLUNZIMA' - IINDABA
U-Ashley Hebert Unombulelo ku-JP Rosenbaum Phakathi koQhawulo-mtshato 'olunzima'
Ukutyhafisa ukukopisha! UAshley Hebert wagxuma malunga nendoda yakhe eyahlukileyo, I-JP Rosenbaum Ukugcina abantwana babo abancinci bonwabile ngeCawa, nge-2 kaMeyi.
Uqhawulo-mtshato lunzima ayinamsebenzi nokuba yintoni, i Isidanga I-alum, i-36, ibhale umfanekiso we-Instagram kwiFordham, 6, kunye no-Essex, 4, bonwabele kumyuziyam. Kodwa maxa onke ndingaxhomekeka ku @_jprosenbaum ukubakhupha abantwana bayokuzibandakanya ngokudibeneyo zizenzo ezimnandi. Enkosi! Ndiyabulela.
Ngokunyanisekileyo kuka-Ashley Hebert / Instagram
Ngaba i-domino ivuliwe ngeholide yeKrisimesi
Ezona nkwenkwezi zangaphambili zaziswa ngo-Okthobha u-2020 ukuba babeyibiza ngokuba iyayeka emva kweminyaka esibhozo betshatile-kodwa bagqiba kwelokuba babekho ukulungiselela abantwana babo abathandekayo.
Owayesakuba nguBachelorette wabhala kwisibhengezo ngelo xesha: Iiyantlukwano zethu zithathe uxinzelelo kubudlelwane bethu kwaye emva kweminyaka sizama ukubuyisela ingozi, sizimisele ukuba kukowona mdla umkhulu wendlu yethu ukudala ubomi obutsha nobwahlukileyo babantwana bethu. Nceda uhloniphe ubumfihlo bethu njengoko siqhubela phambili kunye nobomi bethu obutsha. Ukugxila kwethu kokugqibela kukudala ubomi obuzinzileyo nobulungileyo babantwana bethu. Enkosi ngothando lwakho kwaye uncede kuyo yonke le minyaka. Ndinqwenela nonke uthando, ulonwabo, kunye nokuba nentlalontle.
Inzalelwane yaseNew York, i-44, yongeze kupapasho lobuqu ukuba akukho mntu unoxanduva ngokunqunyulwa kwabo. Ndivakalelwa kukuba wonke umntu uyayiqonda into yokuba singabantu ababini abahluke ngokupheleleyo, abanobuntu neembono ezahluke mpela, abangaboni ngasonye kwizinto ezisisiseko zobomi, ezi ziyakhayo Iibhloko zomtshato owonwabileyo nolungileyo, wachaza.
UTom hiddleston kunye ne-susannah fielding
Ukusukela oko kwahlukana kwabo, ubuntu be-ABC bangaphambili baqhubekile nokubonisa ixesha labo lokuzonwabisa kwimidiya yoluntu, ukusukela ekubhiyozeleni iHalloween ngokudibeneyo ukuya kwinkalo yemihla yokuzalwa kwentombi yabo ngokwembonakalo.
UHebert ude abhekiswe kuye njengoRosenbaum ongumhlobo wakhe omkhulu ngokungapheliyo kwiNdaba ye-Instagram epapasha inyanga yokugqibela.
UAshley Hebert kunye noJP Rosenbaum. UGustavo Caballero / South Beach Ifoto / iShutterstock
Ngelixa ii-exes zigcina ubudlelwane bazo busondele, u-Rosenbaum watyhila ngo-Februwari ukuba ukulungele ukuqala ubudlelwane kwakhona.
Ndinqwenela ukuqala esi sahluko silandelayo, nangona kunjalo ubudlelwane njengotata wabantwana oneminyaka engama-44 ubudala kubhubhane wehlabathi, ingaba oko kubonakala ngathi? umphathi wezophuhliso unolwazi Ewe! Iindaba ngoFebruwari. Ndiyoyika nangaphandle kobhubhane. … Ndiyayithanda imicimbi ukuba yenzeke ngokwasemzimbeni, ngethemba. Kodwa ngexesha elifanayo, ayilo hlabathi sihlala kulo ngoku. Ayifani nokuba siya kwimivalo.
URosenbaum utyhile ukuba waziva ebanjiwe kancinci, eqaphela ngexesha: Ndinqwenela ukufakela iphepha lewebhu. Andiqinisekanga ukuba ndizama njani oku.
Mamela apha Ngezizathu eziLungileyo zokungena ngaphakathi malunga ne-Bachelor franchise kunye nodliwanondlebe olwahlukileyo kubakhuphiswano
ibonisa okufanayo kwiidayari zevampire
Izigaba: Umqala Inetflix Amazon-Prime
ibali lokudlala 4 elimhlophe liluma
brian austin umfazi oluhlaza 2019
Ingelosi yokulwa edward edort norton
umzalwana omkhulu ophumelele i-veto
Utshatile ekuqaleni kwexesha leshumi elinesibini
Ixesha le-wynonna earp ye-3 yomhla wokukhutshwa kwe-Netflix